ချန်ပီယံလိဂ် မှော်ဆရာတွေ နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးညပွဲပြီးရလဒ် – Premier League Special
ချန်ပီယံလိဂ် မှော်ဆရာတွေ နိုင်ပွဲဆက်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးညပွဲပြီးရလဒ်
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်အားလုံး ကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး ရှုံးထွက် အဆင့်မှာတွေ့ဆုံရမယ့်အသင်းတွေ မဲခွဲမှုကို လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်တန်တော့ ရီးရဲလ်ဟာသူ့နေရာမှန်ကိုပြန်ရောက်ရှိသွားခဲ့သလို ပီအက်စ်ဂျီ ဟာလည်းထိုက်တန်တဲ့ ခြေစွမ်းတွေကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီ ၅-၁ အစ္စတန်ဘူးလ်
အင်္ဂါညမှာ ဒိုင်လူကြီးကြောင့် ပွဲဆက်လက်မကစားခဲ့ကြတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ အစ္စတန်ဘူးလ် အသင်းတို့ဟာဒီညမှာ ပြန်လည်ကစားခဲ့ကြပြီး ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက နေမာရဲ့ ဟက်ထရစ်သွင်းဂိုး၊ဘာပေးရဲ့ သွင်းဂိုး(၂)ဂိုးနဲ့အတူ (၅-၁)ရလဒ်နဲ့ အုပ်စု(H)မှာ ဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရီးရဲလ် ၂-၀ မိုချန် ဂလာဘတ်
ဗုဒ္ဓဟူးညရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာ ဇီဒန်း ကတော့ ရီးရဲလ်မှာ သူ့နည်းပြဘဝကို ဆက်လက်ရှိစေနိုင်မယ့် နိုင်ပွဲကိုရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စု(B)ရဲ့ အကျပ်အတည်းကြားထဲကနေ ရအောင် ရုန်းထွက်သွားခဲ့ပြီး လိုအပ်နေတဲ့ နိုင်ပွဲရယူသွားခဲ့သလို သွင်းဂိုး နှစ်ဂိုး စလုံးကို ဘန်ဇီးမားက သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ အုပ်စု(B)ဟာပွဲမစခင်က (၄)သင်းစလုံးအခွင့်အရေးရှိခဲ့ကြပေမယ့် ရှက်တာ ဒိုးနက်နဲ့ အင်တာရဲ့သရေပွဲကြောင့် မိုချန်ဂလာဘတ်ကတော့ ရီးရဲလ်နဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်နောက်တစ်ဆင့်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။
အင်တာ ဝ-၀ ရှက်တာ ဒိုးနက်
ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ကံမကောင်းတတ်တဲ့ ကွန်တီ ဟာ အခုချိန်ထိ ချန်ပီယံလိဂ် အဆုံးအဖြတ်ပွဲတွေဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ ရလဒ်ကို ရအောင် စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးပဲ အုပ်စု(B)မှာ အောက်ဆုံး အဆင့်နဲ့ ထွက်လိုက်ရပါပြီ။ ရှက်တာ ဒိုးနက်ကတော့ ယူရိုပါလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။
မစ်ဂျေလန်း ၁-၁ လီဗာပူး
အုပ်စုဗိုလ်နဲ့ နောက်တဆင့် တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးအသင်းကတော့ စီနီယာ ကစားသမား တော်တော်များများကို ဒီပွဲမှာ အနားပေးခဲ့ပြီး သက်သောင့်သက်သာကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းအတွက် အဖွင့်ဂိုးကို သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ဆာလာဟာလည်း အသင်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး(၂၂)ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့ပြီး ဂျရတ်ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်
သွားခဲ့ကာ အသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးသွင်းအများဆုံး ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
အေဂျက် ဝ-၁ အတ္တလန္တာ
အနိုင်ရရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တာကြောင့် နှစ်သင်းစလုံးဟာ ဒီနေ့ပွဲကြိုးစားကစားသွားခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲချိန်(၇၉)မိနစ်မှာ အေဂျက်ကွင်းလယ်လူ ဂရာဗန် ဒုတိယတစ်ဝါထပ်ထိပြီး အနီကဒ်ပြခံရတဲ့နောက်မှာ အတ္တလန္တာကပိုမိုအခွင့်အရေးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ (၈၅)မိနစ်မှာ အတ္တလန္တာအသင်းအတွက် မူရေးလ်က အဖိုးတန်သွင်းဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီး ၃-၀ မာဆေးလ်၊ အိုလံပီယာကော့စ် ဝ-၂ ပေါ်တို
နောက်တဆင့် တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး နဲ့ ပေါ်တိုအသင်းတို့ဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို ဂိုးပြတ် အနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီး
အုပ်စုဇယားမှာအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ မန်စီးတီးက အုပ်စုဗိုလ်ဆက်လက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပေါ်တိုက ဒုတိယနေရာကနေ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၂-၀ လိုကိုမိုးတစ်မော်စကို၊ ဆာလ်ဇ်ဘာ့ဂ် ဝ-၂ အသက်လက်တီကို
အုပ်စုဗိုလ်အနေနဲ့ နောက်တဆင့် တက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဟာ လိုကိုမိုးတစ်မော်စကို (၂-ဝ)နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့သလို၊
ဒုတိယနေရာက အသက်လက်တီကိုကလည်း ဆာလ်ဇ်ဘာ့ဂ် ကို (၂-ဝ)နဲ့ အနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီး ရှုံးထွက် အဆင့်ကို ဆက်လက်တက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်အားလုံး ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်လာတဲ့ အသင်းတွေက
အုပ်စု ဗိုလ်အသင်းများ – ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၊ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ၊ မန်စီးတီး ၊ လီဗာပူး ၊ ချဲလ်ဆီး ၊ ဒေါ့မွန် ၊ ဂျူဗင်တပ် ၊ ပီအက်စ်ဂျီ
အုပ်စု ဒုတိယ အသင်းများ – အက်တလက်တီကို ၊ မိုချန်ဂလာဘတ် ၊ ပေါ်တို ၊ အတ္တလန္တာ ၊ ဆီဗီလာ ၊ လာဇီယို ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ လိုက်ပ်ဇစ် တိုဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၊ အေဂျက်စ် ၊ ကလပ်ဘရုဂျက် ၊ ဒိုင်နမိုကိဗ် ၊ ခရက်စ်နိုဒါ ၊ အိုလံပီယာကော့စ် ၊ ရှက်တာဒိုးနက်နဲ့ ဆာလ်ဇ်ဘာ့ဂ်အသင်းတွေကတော့ ယူရိုပါလိဂ်ကို ဆင်းကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှုံးထွက် အဆင့်မှာတွေ့ဆုံရမယ့်အသင်းတွေ မဲခွဲမှုကို လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၆)သင်းအဆင့်မှာ အသင်းကြီးတွေက ဘယ်အသင်းတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမလဲ? အုပ်စုဒုတိယအသင်းတွေထဲမှာ ဘာစီလိုနာ၊ အက်တလက်တီကို၊ လိုက်ပ်ဇစ်တို့လိုအသင်းတွေရှိနေတာကြောင့် အုပ်စုမဲခွဲမှုဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေမွာ္ဆရာေတြ ႏိုင္ပြဲဆက္ခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးညပြဲၿပီးရလဒ္
ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ပြဲစဥ္အားလုံး ကေတာ့ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး ရႈံးထြက္ အဆင့္မွာေတြ႕ဆံုရမယ့္အသင္းေတြ မဲခြဲမႈကို လာမယ့္တနလၤာေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ေတာ့ ရီးရဲလ္ဟာသူ႕ေနရာမွန္ကိုျပန္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သလို ပီအက္စ္ဂ်ီ ဟာလည္းထိုက္တန္တဲ့ ေျခစြမ္းေတြကို ျပသသြားခဲ့ပါတယ္။
ပီအက္စ္ဂ်ီ ၅-၁ အစၥတန္ဘူးလ္
အဂၤါညမွာ ဒိုင္လူႀကီးေၾကာင့္ ပြဲဆက္လက္မကစားခဲ့ၾကတဲ့ ပီအက္စ္ဂ်ီနဲ႔ အစၥတန္ဘူးလ္ အသင္းတို႔ဟာဒီညမွာ ျပန္လည္ကစားခဲ့ၾကၿပီး ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းက ေနမာရဲ႕ ဟက္ထရစ္သြင္းဂိုး၊ဘာေပးရဲ႕ သြင္းဂိုး(၂)ဂိုးနဲ႔အတူ (၅-၁)ရလဒ္နဲ႔ အုပ္စု(H)မွာ ဗိုလ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ရီးရဲလ္ ၂-၀ မိုခ်န္ ဂလာဘတ္
ဗုဒၶဟူးညရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြအၿပီးမွာ ဇီဒန္း ကေတာ့ ရီးရဲလ္မွာ သူ႔နည္းျပဘဝကို ဆက္လက္ရွိေစႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ပြဲကိုရယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အုပ္စု(B)ရဲ႕ အက်ပ္အတည္းၾကားထဲကေန ရေအာင္ ႐ုန္းထြက္သြားခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ပြဲရယူသြားခဲ့သလို သြင္းဂိုး ႏွစ္ဂိုး စလုံးကို ဘန္ဇီးမားက သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ အုပ္စု(B)ဟာပြဲမစခင္က (၄)သင္းစလုံးအခြင့္အေရးရွိခဲ့ၾကေပမယ့္ ရွက္တာ ဒိုးနက္နဲ႔ အင္တာရဲ႕သေရပြဲေၾကာင့္ မိုခ်န္ဂလာဘတ္ကေတာ့ ရီးရဲလ္နဲ႔အတူ ခ်န္ပီယံလိဂ္ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။
အင္တာ ၀-၀ ရွက္တာ ဒိုးနက္
ခ်န္ပီယံလိဂ္မွာ ကံမေကာင္းတတ္တဲ့ ကြန္တီ ဟာ အခုခ်ိန္ထိ ခ်န္ပီယံလိဂ္ အဆုံးအျဖတ္ပြဲေတြဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ ရလဒ္ကို ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပဲ အုပ္စု(B)မွာ ေအာက္ဆုံး အဆင့္နဲ႔ ထြက္လိုက္ရပါၿပီ။ ရွက္တာ ဒိုးနက္ကေတာ့ ယူ႐ိုပါလိဂ္ ဝင္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။
မစ္ေဂ်လန္း ၁-၁ လီဗာပူး
အုပ္စုဗိုလ္နဲ႔ ေနာက္တဆင့္ တက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ လီဗာပူးအသင္းကေတာ့ စီနီယာ ကစားသမား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဒီပြဲမွာ အနားေပးခဲ့ၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာကစားသြားခဲ့ပါတယ္။ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးကို သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ဆာလာဟာလည္း အသင္းအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ သြင္းဂိုး(၂၂)ဂိုးအထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး ဂ်ရတ္ရဲ႕ စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္
သြားခဲ့ကာ အသင္းရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဂိုးသြင္းအမ်ားဆုံး ကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။
ေအဂ်က္ ဝ-၁ အတၱလႏၲာ
အႏိုင္ရရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွစ္သင္းစလုံးဟာ ဒီေန႔ပြဲႀကိဳးစားကစားသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္(၇၉)မိနစ္မွာ ေအဂ်က္ကြင္းလယ္လူ ဂရာဗန္ ဒုတိယတစ္ဝါထပ္ထိၿပီး အနီကဒ္ျပခံရတဲ့ေနာက္မွာ အတၱလႏၲာကပိုမိုအခြင့္အေရးရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ (၈၅)မိနစ္မွာ အတၱလႏၲာအသင္းအတြက္ မူေရးလ္က အဖိုးတန္သြင္းဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။
မန္စီးတီး ၃-၀ မာေဆးလ္၊ အိုလံပီယာေကာ့စ္ ၀-၂ ေပၚတို
ေနာက္တဆင့္ တက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ မန္စီးတီး နဲ႔ ေပၚတိုအသင္းတို႔ဟာ ၿပိဳင္ဘက္အသင္းေတြကို ဂိုးျပတ္ အႏိုင္ယူသြားခဲ့ၿပီး
အုပ္စုဇယားမွာအေျပာင္းအလဲမရွိခဲ့ပါဘူး။ မန္စီးတီးက အုပ္စုဗိုလ္ဆက္လက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေပၚတိုက ဒုတိယေနရာကေန ရႈံးထြက္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ၂-၀ လိုကိုမိုးတစ္ေမာ္စကို၊ ဆာလ္ဇ္ဘာ့ဂ္ ၀-၂ အသက္လက္တီကို
အုပ္စုဗိုလ္အေနနဲ႔ ေနာက္တဆင့္ တက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ဟာ လိုကိုမိုးတစ္ေမာ္စကို (၂-ဝ)နဲ႔အႏိုင္ရရွိခဲ့သလို၊
ဒုတိယေနရာက အသက္လက္တီကိုကလည္း ဆာလ္ဇ္ဘာ့ဂ္ ကို (၂-ဝ)နဲ႔ အႏိုင္ယူသြားခဲ့ၿပီး ရႈံးထြက္ အဆင့္ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ အုပ္စုအဆင့္ပြဲစဥ္အားလုံး ၿပီးဆုံးသြားခ်ိန္မွာေတာ့ ရႈံးထြက္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္လာတဲ့ အသင္းေတြက
အုပ္စု ဗိုလ္အသင္းမ်ား – ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ ၊ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ ၊ မန္စီးတီး ၊ လီဗာပူး ၊ ခ်ဲလ္ဆီး ၊ ေဒါ့မြန္ ၊ ဂ်ဴဗင္တပ္ ၊ ပီအက္စ္ဂ်ီ
အုပ္စု ဒုတိယ အသင္းမ်ား – အက္တလက္တီကို ၊ မိုခ်န္ဂလာဘတ္ ၊ ေပၚတို ၊ အတၱလႏၲာ ၊ ဆီဗီလာ ၊ လာဇီယို ၊ ဘာစီလိုနာ ၊ လိုက္ပ္ဇစ္ တိုျဖစ္ၿပီး မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ ၊ ေအဂ်က္စ္ ၊ ကလပ္ဘ႐ုဂ်က္ ၊ ဒိုင္နမိုကိဗ္ ၊ ခရက္စ္ႏိုဒါ ၊ အိုလံပီယာေကာ့စ္ ၊ ရွက္တာဒိုးနက္နဲ႔ ဆာလ္ဇ္ဘာ့ဂ္အသင္းေတြကေတာ့ ယူ႐ိုပါလိဂ္ကို ဆင္းကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ရႈံးထြက္ အဆင့္မွာေတြ႕ဆံုရမယ့္အသင္းေတြ မဲခြဲမႈကို လာမယ့္တနလၤာေန႔မွာ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ (၁၆)သင္းအဆင့္မွာ အသင္းၾကီးေတြက ဘယ္အသင္းေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမလဲ? အုပ္စုဒုတိယအသင္းေတြထဲမွာ ဘာစီလိုနာ၊ အက္တလက္တီကို၊ လိုက္ပ္ဇစ္တို႕လိုအသင္းေတြရွိေနတာေၾကာင့္ အုပ္စုမဲခြဲမႈဟာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေနပါတယ္။
ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲအဆင့်အတန်းနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့အသင်းအဖြစ် အသင်းဟောင်း မန်ယူကို မော်ရင်ဟို မှတ်ချက်ပြု
အင်တာပွဲအဆုံးသတ်ကို Tablet က ကြည့်ပြီးမှ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တဲ့ဂလက်ဘတ်ကစားသမားတွေ